Karnalikhabar » बाढी प्रभावित क्षेत्रका रोग फैलन सक्ने भएकाले खानपानमा ध्यान दिन चिकित्सकको सुझाव बाढी प्रभावित क्षेत्रका रोग फैलन सक्ने भएकाले खानपानमा ध्यान दिन चिकित्सकको सुझाव – Karnalikhabar
बाढी प्रभावित क्षेत्रका रोग फैलन सक्ने भएकाले खानपानमा ध्यान दिन चिकित्सकको सुझाव
प्रकाशित मिति :2017-08-13 13:37:40
काठमाण्डौ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा वातावरण दुषित हुने भएकाले सरसफाइमा ध्यान दिन चिकित्सकहरुले सल्लाह दिएका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रोगको जोखिम हुने भएकाले सफा पानी पिउन र सकेसम्म पकाएको खाना मात्रै खान सल्लाह दिएका छन् । कांचो खानेकुरामा पनि रोग फैलने हुनाले पकाएको खाना खान सल्लाह दिएका हुन् ।
बाढी प्रभावित स्थानमा पानीबाट सर्ने हैजा, झाडा पखाला, हेपटाइटिस र टाइफाइड जस्ता रोग फैलिने प्रबल सम्भावना रहने चिकित्सकको भनाई छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोग फैलन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर त्यस्ता ठाउंमा औषधि र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन समेत दिएको छ ।
केही दिनयताको अविरल वर्षाका कारण तराई तथा मध्यपहाडी क्षेत्रका थुप्रै स्थान जलमग्न भएका छन् भने थुप्रै जनधनको क्षति भएको छ ।
ती ठाउँमा पानीका मुहान प्रदूषित भएकाले उमालेर मात्र पानी पिउन चिकिस्कले सुझाव दिएका हुन् । वर्षा याममा वाढी प्रभावित क्षेत्रमा पानीवाट फैलने महामारी जन्य रोगको खतरा हुने चिकित्सकहरुले बताएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको महामारी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. भीम आचार्यले भने पानी उमालेर खान सुझाव दिएका छन् । त्यसो गर्न नसके पानीमा क्लोरिन झोल हालेर मात्र पिउन सुझाएका छन् ।
पकाएको मात्र खाना खाने र पिउने पानीमा सतर्कता अपनाउन सके पानीका कारण लाग्ने रोगवाट बच्न सकिने चिकित्सकको सुझाव छ । उनीहरुले डुबान क्षेत्रका बासीन्दालाई चिसोवाट समेत जोगिनुपर्ने उत्तीकै जरुरी रहेको बताएका छन् । बाढी गएका ठाउंमा सर्पको समेत खतरा रहने भएकाले ’एन्टी भेनम’को व्यवस्था गरिएको डा. आचार्यले बताएका छन् ।
बाढी गएका स्थानमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन नदिन क्षेत्रगत हिसाबले विशेषज्ञ टोली खटाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धेरै ठाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र डुबानमा परेकोले ती स्थानमा औषधिको जोहो गरिहाल्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले पछिल्ला परिस्थितिको आधारमा स्वास्थ्यका क्षेत्रवाट गर्नुपर्ने पहल लिन निर्देशन दिएको जनाएको छ ।